I-Hot Weather Motorcycle Riding Gear yoKhuseleko noThuthuzo
Iimoto neekhekhi Ukubuyisela & Ukulungiswa
Kwiiklasi zeeklasi zee-motorcycle, ihlobo lixesha lokuhlangana, i-rallylies kunye neqela lokukhwela. Ngelishwa, ukuba imozulu iyatshisa, abagibeli bajongene neminyaka engumdala: ngaba ndikhwela ngaphandle kwendlela yokukhusela ukuze ndihlale ndipholile, okanye ndidlala ngokukhuselekileyo kwaye nishise kakhulu?
Ukubeka iimpahla kwixesha elifudumele libonakala liphosa. Kodwa ngokukhwela umqhubi we-motorcycle ofuna ukukhuseleka nokupholisa, kukho ezinye iinqununu ezikhethiweyo zokugibela iimpahla zokuqwalasela.
Iinqununu zentliziyo zifumaneke iminyaka emininzi. Kodwa i-helmet-face-face-vents-spots-located are recent.
Ukuze sihlale sipholile kufuneka sichithe ubushushu, kwaye phantsi kweemeko eziqhelekileyo, umzimba uya kwenza oko ngentloko yentloko. Nangona kunjalo, ngokukhawuleza xa sigqoka isigqoko, sinciphisa amandla omzimba ukupholisa. Ngoko ke, iinqwelomba ngeempuphu kufuneka ukuba zijikeleze umoya ngaphakathi kwesihenqo kwaye ekugqibeleni zichithe ukushisa ngaphandle.
Imifanekiso enesidima: Scott Diamond Moto-D
Ngexesha lokubhakabhaka, iintlobo ezininzi zeengubo zigcina ubushushu ngaphakathi. Umoya uhlaselwa phakathi kweendlela kunye nokugcina ubushushu bomzimba. Kodwa abaninzi abanikazi bebhayisiki beklasi bahlala kwiindawo zezulu apho kushushu ukukhathazeka. Xa ukufudumala kukukhupha, umgibeli kufuneka abe ne-protective gear engayibambi ukushisa.
Ukuhlangabezana nale mfuno, abavelisi baye bahlakulela izikhwama ezikhethekileyo ngokukhenketha kwezulu. Umzekelo oqhelekileyo yi-suit eyenziwe ngu-Moto-D. I-suit isetyenziswe ukuba isetyenziswe njengengubo yangaphantsi yesikhumba. I-liner ekhunjulwayo inceda umoya ukuba ujikeleze kwaye uvumela ukunyuswa kwamanzi (inkqubo ebizwa ngokuthi i-wicking) kude nomzimba ukukunceda ukulawula ukushisa komzimba.
John H Glimmerveen. Ilayisenisi ku-About.com.
Iibhatyi zesikhumba azivumeli umoya ukuba udlule kuwo. Nangona i-air encinci ingadlula ngendlela ebonakalayo kwaye ibonakala, ngokubanzi iibhatyi zivaliwe. Kodwa ukukunceda ukukhwela umgibeli kwaye ugcine epholile ngexesha elifanayo, abanye bakhiqiza iipakethi ezivumela inani elincinci lomoya ukuba lidlule kuwo. Oku kunceda ukunqumla umoya oshushu oveliswa ngumzimba.
Isigqeba soMzimba wePants Cool
Abaninzi beeklasi zokuhamba ngee-motorcycle bathanda ukugqoka ii-denim jeans xa begibela amabhayisikili abo. Nangona kunjalo, i jeans ayilungile kwindawo yokukhusela yombono kwaye ayiyi kunceda ukupholisa umgibeli ngexesha lokushisa kwezulu
Ukuqaphela ukuba abaninzi abahamba ngee-motorcyclists bakhetha ukugqoka i-jeans, inkampani ebizwa ngokuba yi-Bohn yazisa iingubo ezingaphantsi nje ezinika ukhuseleko kwiindawo ezinobungozi (amadolo amaqatha njl njl), kodwa inceda ukugcina umgibeli epholile ngexesha lokushisa kwexesha. Le mibhobho ekhuselekileyo ilungele ukuba abagibeli bafuna ukugcina i-look ye-blue jean, kunye nenduduzo kunye nokukhuselwa.
UJohn H Glimmerveen Ilayisenisi kwi-About.com
Ukukhusela, isikhumba siyinto efanelekileyo yeiglavu. Kodwa nje ngengubo, iiglavu zesikhumba azintle ukuvumela umoya ukuba ugijime.
Noko ke, kukho iiglavu ezininzi kwiimarike ezinikezela ukukhusela isikhumba kuzo zonke iindawo ezikhuselekileyo, kodwa ziye zavunywa ukuvumela umoya ukuba uphume.
Enye inzuzo yaleziglavu ezivulekileyo kukuba ziya kuvumela umoya ukuba ungene kwi-sleeve yabagibeli, ulungele ukupholisa umzimba. Ukukhupha komoya ngokusebenzisa iiglavu kuyindawo ephephekileyo kunokuba ungenayo ibhatyi lesikhumba kwiikhephe.
Ukususwa kwe-Flywheel kunye nabaPlayers kunye ne-Extractors
I-Tutorial Yobuncitshisi YesiXhosa
Izizathu zokuhamba ngeSithuthuthu
Ukulungiswa nokuHlola iiTyithuthuthu
Indlela yokubuyisela iSithuthuthu
Isikhokelo soKhuseleko lokuThuthukiswa kweeSithuthuthu kunye neengubo
Itheyibhile yeeLwimi eziqhelekileyo zesiLatini
Ukuthelekisa uMsebenzi ka-Edward de Vere noWilliam Shakespeare
Inkomfa ye-Atlantic 10, A-10
Ikhaya kunye neJust pH Iimpawu
Indlela yokudibanisa iifayile zefayile kunye ne-Perl
Indlela yokwenza iKastle-Meyer Solution